Qondaalota ABO mana hidhaatii dhabaman ‘lubbuu isaaniitiif yaaddofne’ jedhu maatiin – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQondaalota ABO mana hidhaatii dhabaman ‘lubbuu isaaniitiif yaaddofne’ jedhu maatiin
(bbc)—Mana murtii waliigalaa Oromiyaa fi Federaalaa irraa bilisaan akka bahan murtaa’ee kan ture qondaaltonni ABO lama Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa mana hidhaa keessa turanirraa bakka geeffaman wallaalame.
Erga mana hidhaatii baafamanii eessa akka jiran akka hin beeknee fi lubbuu isaaniitiif yaaddoo akka qaban maatiin BBC’tti himaniiru.
Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee Adoolessa 4, bara 2012 kan hidhaman namoonni lamaan kun, jeequmsa kakaasuu fi yakkoota shororkeesummaan walqabataniin himataman.
Dhimma isaanii ilaalaa kan ture manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha Muddee 14 bara 2013 ooleen wabii birrii 20,000n akka gadhiifaman murteessee, erga bahaniin booda poolisiin deebisee too’achuun isaas ni yaadatama.
Dhimmi isaanii ol-iyyannoon gara mana murtii waliigalaa Federaalaatti geeffamee manni murtichaa dhaddacha Waxabajjii 24, bara 2013 ooleen himatamtoonni lameen bilisaan akka gadhiifaman jechuun ajajee ture.
Abukaatoon himatamtootaa Obbo Boonaa Yaazoo BBC’tti akka himanitti, ajajni mana murtii waliigalaa Federaalaa kuni bakka himatamtoonni turan waajjjira Poolisii magaalaa Moojoo qaqqabus ajajni mana murtii akka hin kabajamne dubbatu.
‘Lubbuu isaaniitiif yaaddofne’
Qondaalonni ABO Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa Adoolessa 5, bara 2013 irraa eegalee bakka hidhaa turan waajjira Poolisii magaala Moojootii baafamanii eessa akka geeffaman hin beeknu jechuun yaaddoo qaban himu maatiin isaanii.
Maatii keessaa tokko kan ta’e Firaa’ol Beenyaa, Wiixata ganama ciree qabneefii yeroo gaafachuu deemnu ‘asii baafamaniiru’ nuun jedhani jedha.
“Poolisoota yeroo gaafannu asii baafamaniiru jechuu malee ‘ebelutu bakka akkanaa geesse kan jedhu hin beeknu’ nuun jedhu.
“Amma namootni kuni lamaan eessa akka jiran hin beeknu. Lubbuu isaaniitiifuu baay’ee yaaddofna. Amma achi buutee isaanii dhabnee nama gaafannus wallaalle,” jedha.
Ammaan dura yeroo mana hidhaa tokkorraa gara biraa geeffaman odeeffannoo akka argatan kan himu Firaa’ol, miilana garuu eenyurraayyuu homaa odeeffannoo dhabnee rakkachaa jirra jedha.
Dhimma kanarratti poolisii Oromiyaa fi kan bulchiinsa magaalaa Moojoo irraa deebii argachuu hin dandeenye.
Abukaatoon isaanii Obbo Boonaan gamasaaniin maamilootni isaanii kuni bakka geeffaman wallaaluu himuun, adeemsa mana murtii hunda yaalleerra garuu ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru jedhan.
“Wanni karaa mana murtii waliigala Oromiyaas ta’e federaalaa hunduu dhumateera. Tarii waan kuni kan raawwatamaa jiru qaama hoji raawwachiistudhaani jennee shakkina.
“Yeroo ajajni mana murtii kabajamuu didu, mirgi namaa sarbamu kan qoratu komishinii mirga namoomaati. Amma isaanitti iyyachuuf jirra,” jedhan.
Qondaalonni ABO mana hidhaa keessa turanii baafamanii maatii fi abukaatonni isaanii achi buutee isaanii dhaban isaan kana qofaa miti.
Obbo Abdii Raggaasaa torban muraasa dura hidhaarra erga gadi dhiifamanii booda mana osoo hin gahiin deebifamanii to’annoo jala oolfamaniiru.
Haala wal fakkaatuun koloneel Gammachuu Ayyaanaa Caamsaa darbe manni murtii bilisaan akka gadhiifaman erga ajajeen booda akkuma bahaniin Poolisiin fudhatamanii bakki geeffaman akka hin beekamne abukaatoonni BBC’tti himanii turan.
Namooti kunneen eessa akka geeffaman maatiis ta’e abukaatonni quba akka hin qabne dubbatu.
Aanga’oota ABO biroo…
ABOn hoggantoonnii fi miseensonni isaa yeroo gara garaatti hidhamuurraa kan ka’e filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan gaggeesite keessaa dursee ba’uuf akka dirqame beeksisaa tureera.
Erga Eebla darbee jalqabee ammoo Hayyu Dureen dhaabichaa Obbo Daawud Ibsaa mana jireenyaa isaanii keessaa akka hin baane dhorkamuus himeera.
Amnastii Intarnaashinaal ibsa ji’a darbe baaseen, Poolisiin erga Obbo Daawud Ibsaa manatti hidhee namni biraa gara mooraa isaaniitti akka hin gallee fi akka hin baane dhorkeera jedhee, hatattamaan akka gadi dhiifamanis gaafatee ture.
Miseensa hoji raawwachiiftuu ABO kan ta’an Mikaa’el Booranii fi miseensi Gumii Sabaa Kennasaa Ayyaanaa manni murtii bilisa jedhee erga isaan gadhiisee booda qabamanii akka hidhaman dhaabichi himee ture.
Dabalataan dubbii himaan ABO, Battee Urgeessaa, I/G waajjira muummee ABO Gadaa Oljirraa fi kaanis akkasuma hidhamnii akka jiran hima.
ABO’n filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa 2021 irratti hirmaachuu baatus ”rakkoo siyaasaa, nageenyaa fi heera mootummaa biyyattii mudachaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan, filannoon haala akkanaa keessatti gaggeeffamu kamiyyuu seera qabeessa, haqa qabeessaa fi walaba ta’uu hin danda’u” jechuun ibsa baasee ture.
#Oduu_Ammee! Miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa ABO Jaal Jabeessaa Gabbisaa dabalatee miseensonni ABO 4 Mana…
#Oduu_Ammee Gamtaan Afrikaa Mana HD ABO deeman ugguramanii akka deebi’an taasifaman. Gamtaan Afrikaa HD ABO…